Itoobiya oo dhismo cusub ay degto siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa (Sawirro) | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Itoobiya oo dhismo cusub ay degto siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa (Sawirro)
Itoobiya oo dhismo cusub ay degto siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa (Sawirro)
daajis.com:- Dowladda Itoobiya ayaa ugu dambeyn dhismo ay degto siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa, taasoo ah calaamad muujineysaaqoonsi. maadaama Somaliland ay horay iskeed ugu dhawaaqday inay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Sacad Cali Shire oo ka hadlayay saamiga Itoobiya laga siiyay Dekeda Berbera, ayaa ka hadlay halka uu ka imaanayo saamigaas, isagoo tilmaamay in DP world oo lahayd saami ah 65% laga jaray 14%, halka Somaliland oo lahayd 35% laga jaray 5%, sidaasna Itoobiya lagu siinayo 19%, waxase uu sheegay inaanay Itoobiya weli si rasmi ah qayb uga noqon maalgashiga dekedda Berbera.
Dhismaha cusub ee dowladda Itoobiya siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa ayaa ku yaalla Xaafada Bole, waxaa baraha bulshada la soo dhigay sawirka dhismaha iyo boor ku qoran afka English-ka”The Republic of Somaliland Permanent Diplomatic Mission Addis Ababa”, (Jamhuuriyadda Somaliland Xafiiska Diblomasiyadda ee Addis Ababa).
Dhismahan cusub ee ay ku shaqeyn doonto Xafiiska Diblomaasiyadda Somaliland ayaa wax calan ah laga taagan.